Slam national fahafito : nandresy ny avy any Mahajanga, nisongadina i Tagman | NewsMada
Slam national fahafito : nandresy ny avy any Mahajanga, nisongadina i Tagman
Par Taratra sur 19/12/2016
Nikatona tanteraka ny andiany fahafito amin’ny fifaninanana « slam poésie ». Nisongadina ny fankafizan’ny tanora ity karazana literatiora vaovao ity. Teo amin’ny fifaninanana, nibata ny fandresena ny ekipa avy any Mahajanga ary namiratra i Tagman Namgat.
Tontosa ny zoma alina teo ny dingan’ny famaranana tamin’ny fifaninanam-pirenena « slam poésie », andiany fahafito. Raha tsiahivina, tanàn-dehibe folo no nanana solontena ka nivoaka mpandresy tamin’ity famaranana ity ny ekipa avy any Mahajanga, ahitana an’i Leslie, Ilyas El Soyade ary i Prince Kevin Allain. Nahazo ny laharana faharoa kosa ny avy eto Antananarivo, misy an’i Zafimahaleo Barry Benson, Zafimahaleo Jerry Benson ary i Tagman.
Teo amin’ny sokajy olon-tokana, nambabo ny fon’ny mpitsara ny sanganasan’i Tagman Namgat, anarana tsy vaovao intsony, indrindra, ho an’ireo mpankafy « slam ». Norombahin’i José Ricain Ranaivoson kosa ny laharana faharoa raha toa ka samy fahatelo « ex-aequo » i Leslie Jen Miller sy Tokyo Harem. Ankoatra ireo, nisy koa ny fifaninanana « slam » sokajy « média » ka nibata ny fandresena tamin’izany i Seth Seven. Ekipa « fair-play » indrindra kosa ny avy Taolagnaro.
Tsara ny manamarika fa nanomboka ny 10 desambra teo, teto Antananarivo, ny « Slam national » andiany fahafito. Marobe ireo hetsika nokarakaraina tao anatin’izany ary nivelatra tamina foibe ara-kolontsaina samihafa, ankoatra ny fifaninanana, mazava hoazy. Nisy koa ny vahiny avy any ivelany nasaina hanatrika izany, toy ny avy any Frantsa sy Alemaina.
Tsy ny fiakarana an-tsehatra ihany no nataon’izy ireo teto fa nisy koa ny fitsidihana foibe fiahiana ankizy. Vaovao lehibe ho an’ny mpiangaly « slam », nandritra iny « festival » iny koa ny nahazoan’izy ireo filoha vaovao, hiasa mandritra iny taona 2017 iny, izay tsy iza fa i Stella Andriarimino.